असामान्य समय- विविधा - कान्तिपुर समाचार
माघ ४, २०७६ लोकरञ्जन पराजुली
अहिले संसारभर जे भइरहेको छ, अचम्म भइरहेको छ । यी घटनावली दिनदिनै र जताततै भएकाले हामी कतिपयलाई सामान्य नै जस्तो लाग्दो हो । तर अलि ठन्डा दिमागले, अलि निरपेक्ष भावले सोच्ने हो भने खासमा अहिले जताततै अनौठै र उल्कै भैरहेको छ । हामीले पढिआएका पुस्तक, हाम्रा संग्रहित ज्ञान, हाम्रो समाज विज्ञानले अहिले जे भैरहेको छ, त्यसलाई व्याख्या गर्न, बुझाउनसकेका छैनन् । तिनले तर्कहरूलाई धुलो चटाइदिएका छन् ।
यो आलेख अहिले हामीले जिइरहेको समय— जसलाई मैले असामान्य समय भनेको छु— बुझ्ने र अर्थ लगाउने मेरो एउटा सानो प्रयत्न हो । समय असामान्य भएका कारण सामान्य समयका सामाजिक–राजनीतिक सिद्धान्तहरूले काम गरिरहेका छैनन् । हामी सबैजसोले आफूलाई पीडित (भिक्टिम) को रूपमा देखिरहेकाले हामी रातोदिन आवेग, उत्तेजना र क्रोधमा छौं, जुन असामान्य हो । हामी उत्तेजनामा हुँदा त्यसले के गर्दो रहेछ र हाम्रो आक्रोशलाई कसरी नयाँ दुई परिस्थिति— पीसी कल्चर र (अ)सामाजिक मिडिया—ले थप मलजल गरेका छन् भनेर यो आलेखमा मैले चर्चा गरेको छु ।
किन असामान्य समय ?
हामी सिधा हिसाबले कुनै मुद्दा या विषयसँग जोडिन्छौं, हामीले निरपेक्ष हिसाबले त्यसलाई पर्गेल्ने क्षमता गुमाउँछौं । कि त भौगोलिक कि त समयको हिसाबले दूरी बनाउँदा हामीले अलि राम्ररी देख्न–बुझ्न सक्छौं र हाम्रो विश्लेषण गहन हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । त्यसैले कुरा अलि टाढैको मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट सुरु गरौं । अमेरिकामा सन् २००८ को राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा अर्धश्वेत बाराक ओबामा विजयी भए । अमेरिका जस्तो पुरातनपन्थी–बहुल मुलुकमा उनको चयनलाई प्रगतिशीलताको विजयको रूपमा हेरियो । उनी अर्कोपटक पनि चुनिए । ओहो, साँच्चै जमाना फेरिएछ, समयले ठूलै फड्को मारेछ भनियो ।
तर उनी लगत्तै अमेरिकामा यस्तो व्यक्ति निर्वाचित भए (हुन त उनले आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीभन्दा करिब ३० लाख कम मत पाएका हुन्) जो धेरै हिसाबले ओबामाभन्दा ठ्याक्कै विपरीत देखिन्छन् । डोनाल्ड ट्रम्पको विजयमा अन्य पक्षका अतिरिक्त ती मतदाताको ठूलै भूमिका छ, जसले पहिले ओबामालाई मत दिएका थिए र पछि ट्रम्पलाई मत दिए । ओबामालाई भोट हालेको व्यक्तिले लगत्तैको चुनावमा ट्रम्पजस्तो व्यक्तिलाई अमेरिकाको सर्वोच्च पदमा कसरी सहजै मत दिन सक्छ, प्रश्न उठ्छ ।
कुनै राम्रो र नैतिक काम गरेपछि मानिसहरूलाई अर्को नराम्रो वा अनैतिक काम गर्न मनले छुट दिने मनोवैज्ञानिक प्रक्रियालाई ‘मोरल लाइसेन्सिङ’ भनेर व्याख्या गरिएको पाइन्छ । यहाँसम्म ठिकै छ, ‘मोरल’ या ‘सेल्फ लाइसेन्सिङ’का कारण मतदाताले एउटा अनैतिक वा नराम्रो काम गरे भनेर मानौं । तर निर्वाचनपछि मात्रै सार्वजनिक भएका ट्रम्पका हर्कत र उनका झुटका फेहरिस्त (आफू निर्वाचित भएयता उनले १५ हजारभन्दा बढीपटक झुट बोलिसके) हेर्ने हो, उनलाई मत दिने जनता पछुताउनुपर्ने हो । त्यस्तो भएको छैन, अमेरिकी मूल्य–मान्यताको कुरा गरेर नथाक्ने रिपब्लिकनहरू र अझ इभान्जेलिकल क्रिस्चियनहरू एउटा नश्लवादी, महिलाद्वेषी, र झुठ र फरेबको पिण्डको समर्थन र प्रतिरक्षामा अटल उभिएका छन्, उनले जेजस्तो घिनलाग्दो हर्कत गरे पनि । त्यसैले यो वर्ष हुने निर्वाचनमा उनी पुन: विजयी भए भने त्यो अनौठो मानिने छैन ।
भर्खरै बेलायतमा भएको निर्वाचन वा छिमेकी भारतको संसदीय निर्वाचनमा पनि त्यस्तै भयो । वर्षौंदेखि लेबर पार्टीलाई मत दिएर आएकाहरू र आफूलाई अझै लेबर समर्थक भन्नेहरूले खुला रूपमा ‘हो, हामी धनीहरूको, उद्योगीहरूको हित हेर्छौं’ भन्नेहरूलाई मत दिए, लेबरलाई हराए । भारतमा हालैको लोकसभाको निर्वाचनअघि र पछि भएका विधानसभा निर्वाचनमा मतदाताले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) लाई रुचाएनन् । तर लोकसभामा पुन: नरेन्द्र मोदी र भाजपालाई विजयको ताज पहिर्‍याइदिए, पहिलेभन्दा ज्यादा सिटसहित ।
यो त्यही मोदी/भाजपाको सरकार हो, जसले लिएका नीतिका कारण, चाहे त्यो ‘डिमनिटाइजेसन’ होस् वा ‘जीएसटी’, सामान्य भारतीयको खल्तीमा प्वाल पर्‍यो । हामीले देख्दै, पढ्दै, बुझ्दै आएको कुरा के हो भने ‘अर्थ’ ले ठूलै अर्थ राख्छ । प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिमा सत्तामा भएको दलले मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार्दैमा त्यो दलले आउने चुनावमा राम्रै गर्छ भन्ने छैन । तर सामान्यतया जुन सरकारका पालामा जनताको जीवनस्तर खस्कन्छ, त्यो दलले आउने चुनावमा सत्ता गुमाउँछ । तर भारतमा, बेलायतमा त्यो भएन । अहिले ‘इट्स द इकोनोमी, स्टुपिड’ भन्नेहरू स्वयंलाई चुनावी नतिजाले मूर्ख देखाइरहेका छन् ।
मानिसहरू आफ्नो खल्तीमा लामो हात गर्ने दल/व्यक्तिलाई समेत मत दिइरहेका छन् । हिजो काश्मीरमा भाजपाले जे गर्‍यो र आज मुलुकैभरि आफ्नै नागरिकमाथि जे गर्दैछ, त्यो अकल्पनीय छ, यद्यपि त्यसलाई पनि पूर्वीय संस्कृति र मूल्य–मान्यता भन्दै ठूला कुरा गर्नेहरू जोडतोडले समर्थन गर्दैछन् । यो फगत ‘फल्स कन्ससनेस’को कुरामात्र होइन ।
आवेग र पीडितको मनोविज्ञान
किन हामीहरू सही–गलतको भेद छुट्याउन सकिरहेको छैनौं ? किन हाम्रो समाज सामूहिक अधपतनको दिशामा गइरहेको छ ? किनभने अहिले हामीहरू सबैजसो या त उत्तेजित छौं या क्रोधित । एकादुई व्यक्तिको म कुरा गरिरहेको छैन । उत्तेजित हुनु, आक्रोशित हुनु स्वाभाविक हो । हामी पहिले पनि हुन्थ्यौं, तर कहिलेकाहीँ । तर अहिले दिनैभर जस्तो आवेगमा हुन्छौं । दिमागमा आवेग, आक्रोश, प्रेम, रिस, घृणा हुँदा हामीले सोच्ने, विचार्ने, लामो दूरीमा राखेर निरपेक्ष हिसाबले हेर्ने काम कठिन हुन्छ । हामी जीवनका फगत दुई रङ कालो र सेतो देखिरहेका छौं, ती दुई बीचको ठूलो खैरो रङ छुटाइरहेका छौं ।
हामी निरन्तर आवेगमा, उत्तेजनामा किन छौं भने सबैले आफूलाई पीडित देखिरहेका छौं, अरूलाई पीडक । पहिले दमित, शोषित भनिएकाहरू अहिले धेरै हदसम्म बिउँतिएका छन् । व्यक्ति र संस्था (सिस्टम) मिलेर आफूहरूलाई दमनचक्रको घानमा पिसेको उनीहरू देखिरहेका छन् । त्यसैले हक–अधिकारका लागि उनीहरू संघर्ष गरिरहेका छन् ।
उनीहरू दुई कारणले आक्रोशित छन् । एक त दमनचक्रको सपाट तस्बिर हुँदा पनि दमनकारीहरू र ‘प्रिभिलेज्ड’ हरू यो मान्न तयार छैनन् कि उनीहरू दमन गरिरहेछन्, विशेष सुविधा पाइरहेका छन् । दोस्रो, उनीहरू आफैप्रति पनि आक्रोशित छन्, किन यतिका वर्षदेखि हामी यो सहेर आइरहेको भनेर । हामीहरू के हेरिरहेका थियौं भनेर । यसले उनीहरूलाई निरन्तर आवेगको अवस्थामा राखेको छ । उनीहरू आफू जस्तैसँग एकाकार हुन खोजिरहेका छन् । र व्यक्ति/संस्थाको दमनको प्रतिकार गर्न चाहन्छन् ।
अर्कोतर्फ दमनकारीहरू त आतंकित हुने नै भए, दमितहरूका पहिले कहिल्यै नदेखिएका, नसुनिएका समवेत स्वरहरूबाट । हिजोसम्म प्रिभिलेज्ड भएकाहरू पनि भयभित र आक्रोशित छन् । एक त विशेष सुविधा खोसिने डरले । अझ अर्को ‘आफूले नगरेको दोष’ भागी हुनपरेकाले । उनीहरूलाई लागिरहेको छ, ‘होला विगतमा केही भयो होला, दमन पनि, उत्पीडन पनि भयो होला । तर त्यसमा मेरो दोष होइन नि । न मैले कुनै उत्पीडन गरेको छु, न कसैको निगाहबाट केही पाएको छु ।’ उनीहरू भनिरहेका छन्, ‘विगतका कसै अरूका कमी–कमजोरी या बदमासीका कारण मैले अहिले पीडित हुनपर्ने ? मेरो अधिकार खोसिने ?’ यो भयले उनीहरूलाई सगोल बनाइरहेको छ ।
त्यसैले हामी सबका–सब आफूलाई पीडित ठानिरहेका छौं । र आफू जस्तैको साथ खोजिरहेका छौं । गुणदोषका आधारमा होइन, ‘मेरिट’ को आधारमा होइन, मजस्तै मेरो रूपको, मेरो जातको, मेरो लिंगको, मेरो ठाउँको आदि भनेर पक्ष लिइरहेका छौं । गलत होस्, केही भएन । कामचोर या नैतिकहराम, केही फरक परेन । मजस्तै हो, मेरो बिरादरीको हो, सकियो । सबैजना भयाक्रान्त भएकाले गर्दा हामीमा ‘प्राइमेट इन्स्टिङ्कट/लोयल्टी’ हावी भएको छ । आफ्नो बथानको खोजी छ, त्यहाँ । राम्रो–नराम्रो, असल–खराब, सही–गलत केही हेरिएको छैन ।
पीसी कल्चर र (अ)सामाजिक सञ्जाल
पछिल्लो समयका दुई परिस्थितिले यो बथाने मनस्थितिलाई परिपोषण गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ । एउटा हो, ‘पीसी कल्चर’ । निजी र सार्वजनिक जीवनमा एक–अर्कालाई नजिस्क्याई, नहियाई, नहोच्याई बोल्ने कुरालाई हामी ‘पोलिटिकल करेक्टनेस’ भन्न सक्छौं । मैले लेख्ने–बोल्ने कुराले अरूलाई नदुखाओस् भनेर म सचेत हुन्छु र धेरै हिसाबले त्यसो गर्न उपयुक्त नै हो भन्ठान्छु (जस्तो कि यो कुरा यहाँ गरौं कि नगरौं, लेखौं कि नलेखौं भनेर मलाई ठूलो द्विविधा थियो) । तर हामीले यो पीसीलाई अर्कै तहमा त पुर्‍याएनौं ?
म हुर्कंदा घरमा ‘काले’ पनि भएर हुर्किएको हुँ । माया गर्दा पनि काले र गाली गर्दा पनि । फगत ‘टोन’ फरक । स्कुल/कलेज पढ्दा हामी सबैजसोका हाजिरी खातामा लेखिनेभन्दा भिन्न नाम थिए । जिस्क्याउन राखिएका ती कति नामले हामीलाई बिझ्थ्यो होला, तर कतिले सहजै लिएका हुन्थ्यौं । म मेरा अत्यन्त नजिकका साथी बाहेक अरूलाई अहिले ती नामले सम्बोधन गर्दिन । कहिलेकाहीँ साथीहरूको इमेल पाउँदा मुन्तिर त्यही जिस्किने/जिस्काउने नाम पाउँदा पुलकित हुन्छु ।
घरमा, स्कुले जीवनमा (वा कलेजमै पनि) सुन्दै, बोल्दै आएका ती कतिपय नाम, शब्द हामी सार्वजनिक जीवनमा प्रवेश गर्नासाथ उच्चारण गर्न सक्दैनौं । अरू त अरू, साहित्य लेखनमा समेत बाँधिनुपर्ने भएको छ । कुनै पात्रले कसैको भावनामा चोट पुर्‍यायो भने लेखकको हुर्मत लिइन्छ । कथं कतै अनौपचारिक कुराकानी गर्दा केही फुस्कियो भने त्यसले पनि वितण्डा मच्चाउँछ । यसरी सानैदेखि र अनौपचारिक रूपमा सुनी–बोली आएका हाम्रा अभिव्यक्तिमा अकस्मात र अत्यधिक लगाम कसिँदा त्यसले हामीलाई ‘स्ट्रेस’ मा धकेलिरहेको छ । तर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्त गर्न नपाएका कतिपय ती कुरा हामीले अर्कै ठाउँमा, अर्कै हिसाबले अभिव्यक्त गरिरहेका छौं । या त हामी आफ्नो बथानमा या विभिन्न सामाजिक भनिने सञ्जालमा (खुला वा अज्ञात हुँदै) अर्थात् हामी अन्तस्करणबाटै ‘सिभिल’ भैरहेका छैनौं, फगत सिभिल भएको पाखण्ड गरिरहेका छौं ।
मैले कुरा गर्न चाहेको अर्को नयाँ परिस्थिति कथित सामाजिक सञ्जाल हो, जुन खासमा असामाजिक सञ्जाल बनेको छ । हाम्रो आवेग सिर्जनामा म त्यसको प्रभाव पनि उत्तिकै देख्छु । अहिले हामी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, युट्युब लगायतका सञ्जालमा बाँधिएका छौं । यी सञ्जालले निर्माण गरेका ‘अलोगरिदम’का कारण हामी यस्तो ‘इको–च्याम्बर’मा छिरेका छौं, जहाँ हामीले सुन्न–बोल्न चाहेका कुरामात्रै सुनिन्छ–बोलिन्छ । पहिले हामी पत्रपत्रिका पढ्थ्यौं, टिभी–रेडियो हेर्थ्यौं, सुन्थ्यौं । तर हामीले पढ्ने–हेर्ने भनेको मोबाइल र कम्प्युटर भएको छ, पत्रपत्रिका पढ्नदेखि रेडियो–टिभी सुन्न/हेर्नसमेत ।
अहिले पनि पत्रिका, रेडियो, टिभीमा एक तहको विविधता पाइन्छ, फरक वैचारिक धारका सामग्री पनि केही हदसम्म पाइन्छ । तर कम्प्युटर/मोबाइलका कुरा अर्कै छ । फेसबुक वा ट्विटर वा युट्युबले हामीलाई हाम्रो सबैभन्दा नजिकको व्यक्तिले भन्दा ज्यादा चिन्छ । हामीले खाने खाना, हामीलाई मनपर्ने रङ वा फूल, मनपर्ने मानिस, हाम्रो विचारधारा सबै उसले बुझेको छ । हामीले कसैलाई नभनेका कुरा, हाम्रा ‘डार्केस्ट सेक्रेट्स’ सबै उसलाई थाहा छ । हाम्रो ‘डिजिटल फुटप्रिन्ट्स’ कैद गरेकोले ऊ ती सबै जाँची–परखी ऊ हामीलाई हामीले हेर्न–सुन्न–पढ्न खोजेको कुरा पस्किदिन्छ ।
अनि यी सब कुराले हामीलाई झन् साँघुर्‍याउँदैछ, खुम्च्याउँदैछ । हामीलाई थप ध्रुवीकरण गर्दैछ । हाम्रो बथानमा ऊ झन्–झन् हामीलाई धकेल्दैछ । हाम्रा मनका अन्तरकुन्तरमा सुषुप्त रहेका उग्र विचारलाई ऊ ‘रिइन्फोर्स’ गरिरहेछ । हाम्रो अहंलाई तुष्ट गर्दैछ । हामीमा अजस्र घृणा, आक्रोश मौलाउँदैछ । अर्को पक्षबाट हेर्ने, अर्काको धरातलमा बसेर पर्गेल्नै नसक्ने हुँदैछौं हामी ।
अब यदि यो असामान्य समय नै नयाँ सामान्य समय (न्यु नर्मल) हुने हो भने त्यसको व्याख्याका लागि, त्यसको सैद्धान्तीकरणका लागि नवीन शिराबाट, बाकस बाहिरबाट सोच्न आवश्यक भैसकेको छ । अनि यो निरन्तरको आवेग, क्रोधबाट उम्कन र बथाने मानसिकताबाट बाहिर निस्कन जरुरी भैसकेको छ । अन्यथा यसले हामीलाई निकै टाढा पुर्‍याउँदैछ ।
प्रकाशित : माघ ४, २०७६ ०८:२६
मैथिली भाषाको मर्म
माघ ४, २०७६ रामभरोस कापडि भ्रमर
अहिले नेपाल–भारत दुवैतर्फ मैथिली भाषाप्रतिको चिन्ता ह्वात्तै बढेको छ । भारतमा ‘मथिलाराज्य’ र ‘प्राथमिक शिक्षामा मैथिली’को लागि आन्दोलनहरू चर्किंदै गएका छन् । तर सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण के छ भने ती आन्दोलनमा सहभागिताको संख्या र स्तर कस्तो छ– विचारणीय पक्ष हो ।
मैथिली भाषासँग अनुराग राख्ने, त्यसप्रति परम्परागत रूपमा एकाधिकारका दाबी गर्नेहरू मध्येका अभियानीहरू बढी हुन्छन् भन्ने रणनीति अन्तर्गत ती समूहमा समेटिएका केही ‘इतर वर्ग’का प्रतिनिधिहरू पनि हुन्छन् ।
भारतमा मैथिलीको संख्या करोडमा भए पनि तिनका लागि कुनै कार्यक्रम लागू नहुँदा अन्य जातका प्रबुद्ध, शिक्षित जनसमुदाय मैथिली भाषा, साहित्यतिर आकर्षित नहुने, यसका ‘मानक’ स्वरुपको सिकञ्जामा कसिएर छटपटिन पुग्ने बाध्यता भोग्ने अनेकौं प्रसंग हामीबीच छर्लंग छन् । दरभंगा महाराजको समय (लगभग डेढ सय वर्षपूर्व) देखि नै मैथिलीलाई राजदरबारको भाषाको रूपमा स्थापित गरेर तत्कालीन दरबारिया पण्डित, विद्वानहरू यसलाई जनसामान्यको ‘बोली’ भन्दा फरक उच्च वर्गले बोल्ने विशिष्ट भाषाको रूपमा प्रचलनमा ल्याउन सफल भएका थिए । र यसै मानकताको साम्राज्यमा मैथिली विकसित भएर यो ‘उच्च वर्ग’ भनिने केही जातको भाषा बन्न पुग्यो ।
मैथिली भाषी जमातले आफ्नै लवजमा बोल्ने र लेख्ने काम गर्दै आए । परिणामत: मैथिलीको नाममा सरकार र समुदायद्वारा उपलब्ध अवसरहरूमा उनीहरूको हालीमुहाली चल्यो । पद–प्रतिष्ठा प्राप्त गरे । पुरस्कार थापे । अन्य समुदाय झन्–झन् टाढा हुँदै गए । उनीहरूलाई मूलधारमा ल्याउने कुनै प्रयास गरिएन । यो उपेक्षामा अज्ञानताभन्दा रणनीतिक उपक्रम बढी देखिन्छ । एकाधिकारको सुख भोग्ने कामना । र त्यसै अनुरुप आजसम्म हुँदै आएको पनि छ ।
अहिले केही हदसम्म भावनात्मक परिवर्तन भएको बाहिरी गतिविधिबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यो अवस्था सबैलाई समेट्ने उदारभाव जागेर आएको मलाई लाग्दैन । परिस्थितिजन्य बाध्यात्मक अवस्था आएको जस्तो देखिन्छ । अचेल मञ्चमा दस जनामा एक/दुईजना इतर वर्गका प्रतिनिधिलाई पनि राखिहाल्ने परिपाटी चलेको छ । तर मञ्चको केन्द्रविन्दु उनीहरू नै हुने गर्छन् ।
सम्मान, पुरस्कार थाप्नेहरूका सालाना सूची हेरौं– दर्जनौंबीच कुनै एक/दुईजना इतर वर्गका स्रष्टा, अभियानी शौभाग्यशाली बन्न पुग्छन् । पद/प्रतिष्ठाको कुरा हो, यो अहिले पनि तिनै समूहका व्यक्तिहरूले हात पार्छन् ।
रुचि राख्ने, केही उच्च वर्गका मैथिली भाषा, साहित्य अभियानी मित्रहरूको प्रामाणिक कथन अनुसार ‘खास वर्गमा विशिष्ट प्रकारको संस्कारी जिन’ नभए पनि अनेकौं मैथिली भाषा, साहित्यमा अग्रपंक्तिमा उपस्थित भएका छन् र निरन्तर साधनारत छन् । तर यो उनीहरूको वैयक्तिक र संयोगले प्राप्त अवसरको प्रतिफल हो । सहज र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट प्राप्त भएको अवसर भने पक्कै होइन ।
नेपाल क्षेत्रमा त्यस्तै अवस्था छ । नेपाली साहित्यका सबै सरकारी पुरस्कारहरू एकलौटी रूपमा थोकभाउमा एकपक्षीय वितरण हुन्छ भने अन्य भाषाभाषीबाट गरिने मातृभाषा वा राष्ट्रभाषा नेपालीको सेवालाई निरन्तर उपेक्षा गरिँंदै आइएको छ ।
यो आलेखको विषय मैथिली भाषाको वर्तमान अवस्थाप्रति केन्द्रित हुने रहेकोले म आज सबैथोकका एकला हकदार ठान्नेहरू समूहगत रूपमा मैथिलीलाई सबैको भाषा मान्न किन अगाडि सरे त ? यस विषयमा चर्चा गर्नेछु ।
नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले नेपालका भाषामध्ये दोस्रो ठूलो भाषाको रूपमा मैथिली (११.६७) लाई राखेको छ । यो पहिलेदेखिकै निरन्तरता हो । बरु जनसंख्याको गणनामा केही संख्या बढे पनि प्रतिशतमा केही कम आएको देखिन्छ । यो प्रारम्भिक संकेत थियो, जसलाई मैथिलीका दाबेदारहरूले अनुभव गर्न सकेनन् ।
अब नयाँ जनगणना हुँदैछ । जुन गतिले मैथिली भाषीहरूले नै मैथिली भाषा अढाई प्रतिशतको मातृभाषा भएकोले हामीले बोल्ने भाषा मगही वा पश्चिमतिर बज्जिका हो भनेर अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएका छन्, त्यसले मैथिलीका अभियन्ताहरूलाई घचघच्याउन थालेको छ । र अबको नारा ‘मैथिली सबै मिथिलाको साझा भाषा हो’ भन्न सक्नुपर्छ । मञ्चहरूमा सहकार्यको प्रवृत्ति र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालहरूमा खुलेर प्रचार गर्नु यसै आवश्यकताको स्वीकारोक्ति पनि हो । तर पनि यसमा ठूलो पेच अझ पनि खुल्नसकेको छैन । र त्यो हो, भाषाको सर्वव्यापीकरणको लागि शब्दको सहजीकरण अर्थात ग्रामीण शब्दहरूको औपचारिक रूपमा शब्दकोशमा समावेश ।
मैथिलीलाई सबै समुदायको भाषाको रूपमा मान्यता दिन यसको परम्परागत व्याकरण र शब्दकोशमा व्यापक परिमार्जनको आवश्यकता छ । तर यस्तो गर्दा परम्परागत मानक स्वरुपको बखेडा सबैभन्दा ठूलो बाधक बन्न पुग्छ ।
आज यही मानकको बखेडालाई भाषाविज्ञहरू, भाषाप्रति रुचि राख्नेहरूको आवश्यक सहमतिको आधारमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आइपरेको छ । मुखले जे बोलिन्छ, त्यही लेख्नुपर्छ भन्ने नाराकै भरमा भाषा, साहित्यको स्वरुप स्थिर हुन सक्दैन । त्यसका लागि न्यूनतम आधार, सिद्धान्त र स्वरुपको निर्धारण हुनैपर्छ । नत्र भाषा, साहित्यमा छाडातन्त्रको प्रवेशले यसको स्वरुपलाई अझ विकृत बनाउनेछ, आकर्षक होइन । हो, बोल्दाखेरी यथारूप मैथिली भनी स्वीकार गर्नुपर्छ । त्यसमा कुनै मापदण्ड राख्नु भाषाको क्षेत्र अनुसार स्वरुप बदलिने पूर्वको सिद्धान्तको पनि खिलाफ हुन जान्छ । मैथिली पढेका, विद्यावारिधि गरेका, पुस्तक लेखेका कसरी रातारात मगही भाषी भए ? यसका दुई पक्ष कारण छन् ।
१. परम्परादेखि मैथिली भाषाको लेख्य परम्परा र बोलिने भाषिक विशिष्ट शैलीबाट परिचित रहँदै आएका समाजका ठूलो वर्गले आफूलाई मैथिली भाषीभन्दा आफ्नो भाषा र परिवेश फरक भएकोले कालान्तरमा यत्रो वर्ष (लगभग डेढ सय वर्षभन्दा बढी) चुपचाप स्वीकार्दै आए पनि अब नयाँ पुस्ताको सोच र सत्यलाई अवगत गरी भाषाको स्वामित्वलाई ठाढै चुनौती दिनुको सट्टा आफ्नो कित्ता बेग्लै छ्ट्युाउने र मगही लगायतका भाषाको प्रवेश हुन थाल्यो ।
२. समुदायका इतर वर्गभित्र कुनै खास जात–जाति र तिनले बोल्ने विशिष्ट शैलीको भाषा (निश्चय मैथिली) कै कारण आफूलाई अलग–थलग मान्न विवश भइरहेका जनसमुदायलाई एउटा भाषाको नाम दिनुपर्ने ठूलो गृहकार्यपछि मगही भाषा ठम्याए र त्यसपछि मैथिली भाषीहरू ब्राह्मणेत्तर वर्गका केही युवा पिढी, जागरुक समाजसेवी, राजनीतिकर्मीहरू संगठित रूपमा मगहीको प्रचार–प्रसारमा लागे ।
पूर्वमा मैथिली भाषी भनिने २ नं. प्रदेशको सर्लाही पूरा र रौतहट आधा–आधीजति मानिँंदै आएकोमा ती भूभागमा आज बज्जिकाको वर्चस्व छ । त्यस्तै मैथिली भाषाको रूपमा रहेका महोत्तरी, धनुषा, सिरहा, सप्तरी जिल्लामा मगही भाषाको प्रचार बढी देखिन थालेको छ ।
नेपालको प्रारम्भिक र दुई दशक पहिलाको जनगणनामा यी दुई भाषाको अवस्था न्यून थियो भने २०६८ सालको जनगणनाले केही मात्रामा मगही देखाए पनि बज्जिकाको संख्या (७,९१,६४२ ) मा राम्रो बढोत्तरी भएको देखिन्छ । यदि यही अवस्था रह्यो भने अगामी जनगणनामा मगहीको संख्या ह्वातै बढ्ने पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ । गंगाको दक्षिणी क्षेत्रमा बोलिने मगही मध्य मैथिली क्षेत्रमा कसरी छिर्‍यो ? प्रस्ट गर्नुपर्ने जिम्मेवारी भाषा वैज्ञानिकहरूको हैन र ? कुनै पनि भाषाको बढ्दै गएको अस्वाभाविक संख्याको पृष्ठभूमिप्रति चिन्तनशील हुनुको सट्टा अतिरञ्जित रूपमा विरोध गर्नुको कुनै अर्थ हुँदैन । सत्य केलाउनैपर्छ र त्यसपछि आउने समाधान निश्चय नै दीर्घकालीन हुनेछ ।
नेपालमा आजसम्म भाषा–वैज्ञानिक सर्भेक्षण गरिएको छैन । जनगणनामा गएका गणकहरू विज्ञ हुँदैनन् । उनले प्राप्त हलफनामालाई नै सामान्यत: अन्तिम ठान्छन् । एकै परिवारका थरीथरीका मातृभाषा लेखाउनेहरू पनि देखापर्न सक्छन् । त्यसैले जनगणना अघि भाषाप्रति गम्भीर छलफल र दिशानिर्देश दिनु आवश्यक छ । मैथिली क्षेत्रमा मात्रै होइन, पहाडी क्षेत्रमा पनि भाषा सम्बन्धी समस्या आउन सक्छ, त्यतातिर पनि समयमै ध्यान पुर्‍याउनसके त्यो विवादलाई न्यून गर्न मद्दत हुनेछ । जनगणनापछिको विश्लेषण बैठकहरूमा यसबारे गम्भीरतापूर्वक विमर्श हुनु जरुरी हुनेछ ।
समष्टिमा विचार गर्दा मैथिली भाषाको प्राचीन र समृद्ध स्वरुपलाई निरन्तर अग्रगामी बनाइराख्न यसमा व्याकरण र शब्दकोशको निर्माण नयाँ ढंगबाट गर्नुपर्छ । पाठ्य–पुस्तकको लेखन र सम्पादन त्यसै व्याकरण र शब्दकोशको आधारमा हुनुपर्छ । जसले गर्दा भाषाप्रति अपनत्व बढ्न सकोस् र भावनात्मक उद्वेगमा जसले पनि कुनै वर्ग विशेषको भाषा भनी मैथिलीको छुट्टै नामकरण गरी आफू अत्यन्त समृद्ध र बहुसंख्यक बोलिने भाषाबाट पृथक बस्न नयाँ भाषालाई मातृभाषाको रूपमा स्वीकार गर्न लागिपरेका छन्, तिनीहरूले पनि पुनर्विचार गर्न सकुन् ।
मैथिली भाषा आजको अवस्थासम्म आइपुग्न निकै दशकको कठिन दौडबाट गुज्रेको छ । यस्तै विकसित भाषाको अवस्थामा पुग्न अन्य नयाँ भाषाभाषीलाई कति दशक अझ संघर्ष गर्नुपर्ने हो, त्यो अहिल्यै भन्न सकिँदैन ।
प्रकाशित : माघ ४, २०७६ ०८:२२